मधेशवाणी रेडियो कार्यक्रम
विजय कुमार सरावगी, मेयर, वीरगन्ज महानगरपालिका, पर्सा
Baishakh 31, 2078
यस्तो महामारीका बेला महानगरले खासै तयारी गर्नुपर्ने देखिँदैन । संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले सबै कामहरु हेर्नुपर्ने हो । संवैधानिक व्यवस्था पनि हेर्ने हो भने वैश्विक महामारीहरुलाई केन्द्र सरकारकै जिम्मेवारी छ । केन्द्र सरकारले आफै गरोस् वा प्रदेश सरकारमार्फत् गरोस् । हामी पालिकाहरुले कार्यान्वयनमा मद्दत गरिदिने काम हो । त्यो काम हामीले राम्ररी गरिरहेका छौं । म त के भन्छु भने त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर पालिकाहरुले काम गरिरहेका छन् । जबकि हामीलाई खासै केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट सिधै कुनै सहयोग त्यस्तो छैन । हामीले चलाइरहेको अस्पतालमा पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोग छैन । हामीले गरिरहेका कुनै पनि काममा कहींकतैबाट कुनै सहयोग छैन । महानगरपालिकाले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम गरेको छ । यो कुरा सबैले बुझेका छन् ।
महन्थ ठाकुर/उपेन्द्र यादव, अध्यक्षद्वय, जसपा नेपाल
Baishakh 29, 2078
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावको पक्ष छ, म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन र विपक्षमा पनि छैन । किनकि हामीहरु आफूलाई पनि राजनीतिक दृष्टिले लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि विदित अवस्थामा छौं । हाम्रा साथीहरु जेलमा छन्, हामी सांसद जेलमा छन्, रेशम चौधरीलाई त हामी यहाँ हेर्न चाहन्छौं तर उहाँ त जेलमा हुनुहुन्छ । त्यस्तै प्रदेशका हाम्रा मन्त्रीहरु पनि तारेखमा छन्, हाम्रा धेरै मेयरहरु तारेखमा बसेका छन् र सयौं कार्यकर्ताहरु अझै पनि विभिन्न किसिमका मुद्दाहरु खेपिरहेका छन् । किन ? यो संविधानले गर्दा । अहिलेको जुन अवस्था हामी हेर्छौं, त्यो संविधानको त्रुटिले गर्दा नै हो । यदि हामी जुन आन्दोलन गरेका थियौं संविधानमा संशोधनका लागि, यदि त्यसबेला हाम्रो कुरा सुनिएको भए सायद आज जुन स्थिति छ त्यो आउने थिएन ।
विमल प्रसाद श्रीवास्तव, प्रतिनिधिसभा सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Baishakh 28, 2078
कथित मसिहा नै हुन् उपेन्द्र यादव । यिनीहरुको विगत हेर्नुस् त । हिजोसम्म एउटा कुर्ता पैजामा लगाएर सानो झोला बोकेका मान्छेको अहिले विलासिता जीवन हेर्नुस् त । उनीसँग करोडौंको फ्ल्याट छ, डेढ–डेढ करोडको गाडी चढेर हिंडिरहेका छन् । त्यो त खोजबिन गर्नुप¥यो । कहाँबाट यत्रो पैसा आयो ? मन्त्री पाउन्जेल ठिक । यहाँसम्म कार्यकर्तालाई समेत स्थान नदिएर आफ्नो परिवारका मान्छेलाई स्वकीय सचिवमा राख्ने, देशविदेश घुम्न जाँदा आफ्नै बालबच्चालाई लिएर जाने, कहिलेकाहीं पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि हेरेको भए हुन्थ्यो नि । अहिले कुन पार्टीका नेताले डेढ करोडको गाडी चढेका छन् ? तर क्रान्तिकारी पार्टीकै नेताले डेढ करोडको गाडी चढ्नुपर्ने ? त्यसमा पनि कुनै राजदूतावासको लगानी होला । मैले सुनेको कि पार्टीले किनिदियो रे । यसबाट पनि मूल्यांकन गर्न सकिन्छ नि ।
Baishakh 27, 2078
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिनेबारे आफ्ना सांसदहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न भनेको छ । जसपा निर्णायक शक्ति भएपनि प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतबारे कुनै आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । पार्टी एकता बचाउनका लागि सांसदहरुले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न दिइएको हो । जसपा नेपालको शीर्ष नेतृत्व के पी ओलीको बिपक्ष वा तठस्थ बस्ने सवालमा बिभाजित रहेकोले, पार्टीमा शीर्ष नेतृत्वको बिच बर्तमान राजनीतिक अवस्थाको बुझाई र जसपाको प्राथमिकता बारे मतैक्यता नरहेकोले पनि जसपा यसबारे आधिकारिक निर्णय नगरेको हो । पार्टीमा शीर्ष नेतृत्वमा दुईलाइन संघर्ष नेपाल सरकार संग मुद्दा फिर्ता, राजबन्दी रिहाई, संबिधान संशोधन, नागरिकता बिधेयक, लाल आयोग सार्बजनिक लगायतको बिषयमा के पी ओली नेतृत्व सँग कुनै वार्ता गर्नै हुदैन र अर्को लाईन सकारात्मक परिणाम निस्कन्छ भन्ने किन नगर्ने
अजय कुमार गुप्ता, मेयर, गौर नगरपालिका, रौतहट
Baishakh 24, 2078
कोरोना महामारीको नयाँ भेरिएन्टसहितको संक्रमण धेरै नै खतरनाक छ । गौर नगरपालिका यस सन्दर्भमा सुरुदेखि नै सचेत छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रय भारतीय सीमासँग जोडिएको कारणले पहिलादेखि नै सीमानाकामा हेल्पडेस्क स्थापना गरिसकेका छौं । भारतमा विभिन्न कारणवश गएका नेपालीहरु फर्किँदा नाकामै एन्टिजेन टेष्ट गरेर पोजिटिभहरुलाई आइसोलेसनमा र निगेटिभहरुलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा हात धुने व्यवस्थाहरु गरेका छौं । घरबाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने र नलगाउनेलाई जरिवाना पनि तोकिएको छ । त्यसको पूर्ण पालना पनि भइरहेको छ । गौरका हाटबजारहरु बन्द गरिएको छ । गौर नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट कमसेकम १० बेडको अक्सिजनसहितको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गइरहेको छ । कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टलाई कसरी रोकथाम गर्नेबारे विभिन्न रणनीतिहरु बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।
गिरिराजमणि पोखरेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
Baishakh 22, 2078
राजनीतिक शक्तिहरुले एउटा ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आफ्ना विषयहरुलाई आफैले टुंग्याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । अप्ठ्यारो बेलामा दलहरु मिलेर पनि काम गरेका छन् । अहिले आफ्नो गुटको सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले धेरै आश्वासनहरु दिनुभएको होला । तर महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको पक्षले पनि ओलीको सरकारमा जाने जस्ता कुराहरु गर्नुभएको छैन । एमालेभित्रको माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पक्ष कुन ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले पनि महत्व राख्दछ । राजनीतिमा यो पक्षलाई पनि उहाँले ध्यान दिनुभएको छ भन्ने लागेको छ । आफ्ना मागहरु पूरा गराउनका लागि यो संकटका बेला आफूसँग भएको महत्वपूर्ण शक्तिलाई लिएर लाभ लिनुलाई अन्यथा ठानिँदैन । तर मुलुकलाई सही दिसामा लैजाने निर्णायक बेलामा महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गर्नुभएको पक्षले पनि गम्भीर ढंगले विचार गर्छ ।
वृषेश चन्द्र लाल, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Baishakh 20, 2078
हाम्रो मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हामीले विश्वासको मत दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ र समर्थन पनि गर्नुपर्छ । हामीले विश्वासको मत दिँदा कुन–कुन आधारमा हामी विश्वासको मत दिन्छौं भन्ने कुराहरुबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ । अथवा हामीले किन विश्वासको मत नदिने भन्ने कुराहरु पनि त आउनुप¥यो । त्यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ र त्यसले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्छ । पार्टीभित्र विश्वासको मतबारे निर्णय गर्दा खुलेर नै आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो मागलाई सम्बोधन हुने स्थितिलाई नै हामीले केन्द्रमा राख्नुपर्छ । जुन सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न तयार हुन्छ उसलाई नै हाम्रो विश्वासको मत दिनुपर्छ । छापामार शैलीजस्तो सांसदहरुसँग हस्ताक्षर गराउने कार्य चल्दैन । मधेश आन्दोलनप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं । त्यसैले हाम्रो माग सम्बोधन हुने स्थितिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
राजेन्द्र महतो, वरिष्ठ नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Baishakh 16, 2078
उपेन्द्र यादवजीको भनाइलाई अन्यथा लिनुहुन्न । हाम्रा पार्टीका कुनै नेताले केही भन्दैमा त्यहीं कुरा पार्टीको लाइन हुँदैन । अन्ततोगत्वा पार्टीको निर्णयअनुसार नै हुन्छ । मुद्दा मामिला सरकारले नै फिर्ता गर्ने हो । विगतमा ओली, प्रचण्ड र कोइरालाहरुले मुद्दा फिर्ता लिएन तर अहिलेको सरकारले लिइरहेको छ । जुन दुईबुँदे सहमति गरेर उपेन्द्रजी सरकारमा जानुभएको थियो, त्यो उहाँले कार्यान्वयन गराउन सक्नुभएन । अब सरकार त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ । सरकारसँग सहकार्यका लागि जहाँबाट सम्बन्ध टुटेको थियो, त्यहाँबाट सरकारले त्यो सम्बन्ध जोड्नुपर्छ । त्यसपछि हाम्रो कुरा सकारात्मकरुपमा अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसपछि पार्टीले यो सरकारसँग पनि सहकार्यको अवस्था बनाउने निर्णय गर्छ । त्यसैले आगामी दिनमा पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यो सरकारको क्रियाकलापमा नै निर्भर गर्छ ।
ओमप्रकाश सर्राफ, सामाजिक अभियन्ता तथा जसपाको वीरगन्ज महानगर अध्यक्ष
Baishakh 13, 2078
वीरगन्ज पुनः कोरोनाको हटस्पट बन्दै गइरहेको छ । दैनिक यहाँ ७० देखि ८० जना औसतमा कोरोना संक्रमितहरु फेला परिरहेका छन् । डरलाग्दो कुरा के छ भने लगभग डेढ सयको हाराहारीमा कोरोना जाँच गर्दा लगभग सय जना जति संक्रमितहरु फेला परिरहेका छन् । यसको मतलब वीरगन्जमा कोरोना संक्रमणको दर लगभग ७० प्रतिशत रहेको छ । यसले प्रष्ट संकेत गर्दैछ कि वीरगन्जमा भयावह स्थितिको सिर्जना हुँदैछ । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा लक्षणसहितका विरामीहरु खचाखच भरेका छन् । एउटा बेडमा तीन–तीन जना विरामीलाई राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । होम आइसोलेसनमा पनि लगभग ६ सयदेखि ७ सय पोजिटिभ केशहरु छन् । कोरोनाको दोस्रो लहर जब सुरु हुन थाल्यो, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा पनि बढ्न थालेको समाचारहरु आउन थाल्यो त्यतिबेलासम्म पूर्वतयारी गर्ने हामीसँग प्रशस्त समय थियो ।
डा.धवल शम्शेर राना, मेयर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेश
Baishakh 12, 2078
नेपालगन्जमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्ररुपमा बढ्दै गएको छ । यसमा हामीबाट कहीं पनि चुक भएको छैन । यो कोरोनाको दोस्रो लहर विश्वव्यापीरुपमा आएको हो । मित्रराष्ट्र भारतमा यसको बिगबिगी फैलिएपछि त्यसको असर यहाँ पनि आउने स्वाभाविकै थियो । नेपालगन्जमा दैनिकजसो कोरोनाबाट मृत्यु भइरहेका छन् । किनभने नेपालगन्ज जिल्लाको नाका हो र छिमेकी राज्यहरुमा यो रोग बेस्सरी फैलिएको कारणले यहाँ आक्रामक स्थिति देखिएको हो । नेपालगन्जसँग टाँसिएको भारतको सीमा अहिले पनि खुल्ला नै छ । भारतबाट आउने नेपाली दाजुभाईहरुलाई जाँच गरेर कोभिड भएकालाई आइसोलेसनमा राखिरहेका छौं र कोभिड नभएकालाई आआफ्नो घर पठाउने क्रम जारी छ । कोभिडलाई रोक्नका लागि मुख्य उपाय भनेकै सामाजिक दूरी कायम गर्नु हो । हामीले लकडाउन पनि गरिसकेका छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ ।
मनिष कुमार सुमन, जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य
Baishakh 10, 2078
जीवन्त राजनीतिक दलमा दुई–तीनवटा वैचारिक धार हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । लोकतन्त्रमा पार्टीका नेताहरु पृथक–पृथक विचार राख्नु पनि स्वाभाविक देखिन्छ । अहिले जसपामा सरकारको बारे दृष्टिकोण, सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकाबारे अथवा सरकारलाई समर्थन वा विरोध गर्ने वैचारिक दृष्टिकोणमा केही पृथकता सञ्चारमाध्यमहरुबाट आइरहेका छन् । त्यसलाई हामीले स्वाभाविकरुपमा लिएका छौं । कसैलाई कोही प्यारो, कसैलाई कोही ठिक भन्ने जस्ता कुराहरु छलफल हुनु लोकतन्त्रमा एकदम स्वाभाविक हो । तसर्थ, हाम्रा पार्टीको नेतृत्वमा तहमा पनि आआफ्ना विचार राख्नेलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर पार्टीले आधिकारिकरुपमा कसैलाई समर्थन गर्दा अथवा विरोध गर्दा आधिकारिकरुपमा नै निर्णय गर्छ र त्यो सबैलाई मान्य पनि हुन्छ । यो कुराको निक्र्योल जसपाको केन्द्रीय कार्यकार्यकारिणी समितिको बैठकबाट हुनेछ । त्यो निर्णय अल्पमत वा बहुमतले होइन, सर्वसम्मत तरिकाले निर्णय हुनेछ ।
अमरेश नारायण झा, लेखा परीक्षण समितिका प्रमुख, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Baishakh 09, 2078
कुनै पनि हालतमा जसपा विभाजन हुँदैन । जसले पार्टीलाई विभाजन गर्छ उसलाई जनताले माफ गर्दैन । किनभने जसपा निर्माण कुनै नेता विशेषको इच्छाले मात्रै भएको होइन, आमजनताको भावना र चाहनासँग जोडिएको छ । यदि हामीले आमजनताको भावना र चाहनाविपरीत कुनै कदम चाल्यो भने अब जनताले हामीलाई माफी दिनेवाला छैन । अब जनता बेबकुफ छैन कि हामी जे भन्छौं त्यो मानिहाल्छ । जनता राजनीतिक रुपमा पनि सजग भइसकेका छन्, सबैको चरित्रलाई हेरिसकेका छन् । कसले के गरिरहेका छन्, जनताले मूल्यांकन गरिरहेका छन् । कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि यदि पार्टीलाई विभाजन गर्छ भने उसको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्छ । त्यसैले जसपा फुट्ने सम्भावना पनि छैन । किनभने जनता र कार्यकर्ताको खुन पसिनाबाट निर्माण भएको यो पार्टी हो ।
राजीव झा, केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Baishakh 07, 2078
लुम्बिनी प्रदेशका चार जना सांसद मन्त्री हुँदा कारबाही गरिएको भन्ने हल्ला फिजाइएको छ । तर प्रदेश सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेश कमिटीलाई छैन । प्रदेश कमिटीले सांसदलाई कारबाही गर्न सक्दैन । लुम्बिनी प्रदेशमा अशोक यादव र रविदत्त मिश्रले निकाल्नुभएको दुई छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिहरु अवैधानिक हो । ती दुवै जनाको विज्ञप्ति आधिकारिक होइन । उहाँ दुवै जनामध्ये कोही पनि जसपाको प्रदेश अध्यक्ष नै होइन । अशोक यादव तत्कालीन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन् भने रविदत्त मिश्र तत्कालीन राजपाका अध्यक्ष हुन् । प्रदेशस्तरमा जसपा अहिलेसम्म समायोजन भइसकेको छैन । जसपामा अहिले चार तहको समीकरण मात्रै छ । एउटा पदाधिकारी समिति जसमा पाँच जना हुनुहुन्छ । त्यसपछि कार्यकारिणी समिति छ जसमा अहिले ५१ जना हुनुहुन्छ तर ५३ सदस्यीय हुने हो ।
उपेन्द्र महतो, जसपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य
Baishakh 05, 2078
सबै मन्त्रीहरुले वाकयुद्ध गरेको मैले देखेको छैन । तर एकजना अल्पज्ञान भएका राज्यमन्त्रीले बोल्नु हास्यास्पष्द हो । त्यो मन्त्रीको विगत हेर्नुस्, कहिले राजेन्द्र महतोसँग हुँदा उपेन्द्र यादवलाई गाली गर्ने, उपेन्द्र यादवसँग हुँदा राजेन्द्र महतोलाई गाली दिने । यो उनको अल्पज्ञान हो । बढी चाप्लुसी गर्ने, कसैलाई खुशी पार्नका लागि जे पायो त्यहीं बोलिराख्ने । कसैलाई खुशी पार्नका लागि केही बोल्नु हुँदैन भनेको होइन तर कसैको मानहानी हुने कुरा गर्नु हुँदैन । त्यसको मूल्यांकन पार्टीले पनि गरिरहेको छ । उनको सोच कस्तो रहेछ भन्ने कुरा पार्टीले पनि मूल्यांकन गरिरहेको छ । उसलाई पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरुले समाजिक सञ्जालबाटै जवाफ दिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उसको स्टेटसमा हेर्नुस् कमेन्टहरु कति राम्रा–राम्रा अतिउपदेशहरु त जनताले नै दिइरहेका छन् नि ।
ई.इन्द्रजीत यादव, उप–महासचिव, जनमत पार्टी
Baishakh 03, 2078
जनमत पार्टीको प्रथम महाधिवेशन ऐतिहासिकरुपमा गत चैत २८ गते जनकपुरधामको बाह्रबिघामा सम्पन्न भयो । यसको मूल भाव जनताको बीचबाट चुनिएर आएका पार्टीका जुन संस्थागत पदाधिकारीहरु हुन्, उनीहरु छनौट भएका छन् । लोकतन्त्रको मान्यताअनुसार जनमत पार्टीले ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । जनमत पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट उल्लेख्यरुपमा जनसहभागिता देखिएको थियो । हाम्रो महाधिवेशनमा जनताहरु स्वतःस्फूर्तरुपमा सहभागिता जनाएका थिए । मधेशमा अब जनमत पार्टी एउटा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा आइसक्यो भन्ने खालका जनताको भावना पनि देखियो । जनताको माग र अधिकार जनमत पार्टीले पूरा गराउन सक्छ भन्ने विश्वास पनि सो सहभागिताले अभिव्यक्त भएको हामीले महसुस गरेका छौं । अन्य राजनीतिक दलहरुले जतिसुकै आश्वासन वा भाषण गरे पनि जनमत बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प छैन । मधेशले अब विकल्प पाइसक्यो ।
देवेश झा, राजनीतिक विश्लेषक तथा मधेश सम्वाद समूहका संयोजक
Baishakh 02, 2078
संसदीय राजनीतिमा संसदभित्रको गणितीय संख्याले सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्छ । यसलाई किन्तु परन्तु लगाएर रोक्ने प्रक्रिया राजनीतिक सम्मत वा राष्ट्रहितको कुरा भन्न मिल्दैन । हलो अड्काएर गोरु चुट्ने जुन उखान छ, यहाँ ठ्याक्कै मेल खान्छ । प्रचण्डले अहिले समर्थन फिर्ता नलिएर जसपालाई लक्षित गरेर टिप्पणीहरु आइरहेका छन्, आश्चर्यको कुरो हो । हिजोसम्म मधेशी नेताहरुलाई पदलोलुपको संज्ञा दिने मिडियाहरुले अहिले सत्तामा नगइदिएको कारणले हलो अड्काएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । जसपाले आफ्नो मुद्दाका लागि राजनीति गर्ने कि ओलीलाई ढाल्ने वा अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने ? स्वाभाविक छ, कुनै पनि राजनीतिक दल जुन भोटबैंकको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसको स्वार्थका लागि उसले राजनीति गर्नुपर्ने हुन्छ । जसपा मधेशको भोटबैंकमा आधारित पार्टी हो, त्यसैले मधेशसँग जोडिएका मुद्दाहरु अहिले उसको प्राथमिकतामा छ र हुनुपर्छ ।
सत्यनारायण मण्डल, नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Chaitra 31, 2077
माओवादी केन्द्रले यो सरकारलाई दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता नै लिएको छैन । अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गर्न सकिने आधार पनि छैन । भनेपछि वैकल्पिक सरकार निर्माण हुने अवस्था नदेखिएकोले भविष्यमा उनीहरुको सरकार बन्ला र हाम्रो माग पूरा गर्ला भनेर कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टरुपमा भनिसक्नुभएको छ कि सकेजति मुद्दाहरु सम्बोधन गर्छौं र प्रक्रिया पनि सुरु गरिसक्नुभएको छ । मधेशका समस्याहरु सम्बोधनका लागि उहाँले विभिन्न पाइला चालिसक्नुभएको पनि छ । प्रधानमन्त्री ओली एउटा प्रष्ट र स्पष्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले, मधेशका मुद्दाहरु सम्बोधन गराउनका लागि अहिलेकै सरकारलाई साथ दिने बाहेक जसपासँग अर्को विकल्प छैन । मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउनुभएको अग्रसरतालाई मध्यनजर गर्दै जसपाले समर्थन गर्नैपर्छ ।
डा.सुरेन्द्र झा, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Chaitra 27, 2077
अहिले नै कसैसँग सत्ता गठबन्धनका लागि जाने भन्ने विषयमा छलफलै भएको छैन । कांग्रेसको सभापतिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ, यो प्रस्तावको सन्दर्भमा जसपाको बैठक बस्छ र बैठक यसबारे निर्णयहरु अगाडि बढाउँछ । एउटा त के छ भने नेपाल सरकारसँग हाम्रो वार्ता सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ । हाम्रा समस्यासँग जोडिएका सवालहरुमा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग हामी नजिक छौं । कांग्रेसको प्रस्तावको बारेमा एउटा अवधारणा बनाउने परिस्थिति हुनसक्छ । हाम्रो मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसमा पनि हामी नेपाल सरकारसँग नजिक छौं । अर्को कुरा कांग्रेसले एक पक्षीय ढंगले एउटा निर्णय गरिसकेकोले त्यो गठबन्धनमा लथारिएर जानुपर्ने बाध्यता जसपाका लागि छैन । वैकल्पिक सत्ता गठबन्धन निर्माणका लागि सबैभन्दा आधारभूत कुरा माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हो ।
भरतविमल यादव, वरिष्ठ लोकतन्त्रवादी नेता
Chaitra 26, 2077
अहिलेको यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण नेताहरुमा राजनीतिक इमान्दारिताको एकदमै अभाव देखियो । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा हेर्ने हो भने राजनीतिक नैतिकता खडेरी नै परेको छ । व्यक्तिवादिता एकदम बढी हावी भएर गएकोा छ । हरेक पार्टीको उदाहरण लिन सकिन्छ । सबै पार्टीभित्र सत्तालिप्सा, गुटगत लाभ र व्यक्तिवादिता चरम सीमामा रहेका छन् । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफलतातर्फ गइरहेको छ भन्ने किसिमका आवाजहरु पनि सुनिन्छ र देखिन्छ पनि । यसको मुख्य कारण राजनीतिक नैतिकताको अभावका कारण नै हो । हामीले गाउँघरमा भन्ने गरेका हुन्छौं कि जो मान्छे सबभन्दा बढी फटिचर हुन्छ, उसलाई हामीले नेता भनेर सम्बोधन गर्छौं । त्यस्ता नेताहरु मात्रै नेपालमा च्याउ उम्रेजस्तै उम्रियो । इतिहासमा राजनेताहरु पनि नेता थिए, तर वर्तमान परिवेशमा हामीकहाँ राजनेता त छँदैछैन ।
ई.बसन्त कुशवाहा, केन्द्रीय सदस्य, जनमत पार्टी
Chaitra 25, 2077
जनमत पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन एक दिवसीय मात्रै गर्ने योजनामा छौं । महाधिवेशनका ५ हजार दुई सय प्रतिनिधिहरु छन् । यसबाहेक मधेशका हरेक जिल्लाबाट करिब २५ हजारसम्म युवा जनमत संघका स्वयम्सेवकहरु आउनेछन् । सम्पूर्णको व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी करिब–करिब पूरा भइसकेको छ । दुई वा तीन दिन महाधिवेशनलाई लम्ब्याउँदा बढी खर्चियो भएको हुनाले हामी एक दिनमै सम्पन्न गर्ने योजनामा छौं । हामीले समय तालिकाअनुसार काम गर्ने हो । ठिक १० बजे बिहान हाम्रो महाधिवेशन सुरु हुनेछ । १२ बजेसम्म हाम्रो खुल्ला सत्र हुनेछ । त्यो अवधिमा महाधिवेशनमा आएका अतिथिहरुले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन्छ । त्यसपछि १२ बजेदेखि २ बजेसम्म स्वयम्सेवक साथीहरुलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ । २ बजेदेखि ३ बजेसम्म ब्रेक हुनेछ ।
मोहन कुमार सिंह, अध्यक्ष, मधेशी पत्रकार समाज तथा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष (समावेशी)का उम्मेद्वार
Chaitra 23, 2077
नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न २६औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष (समावेशी) पदका लागि मैले उम्मेद्वारी दिएको छु । मेरो उम्मेद्वारी किन भन्ने धेरैको जिज्ञासा पनि होला । यसमा म के भन्न चाहन्छु भने जुन बेला महासंघको संरचना समावेशी थिएन, त्यसबेलादेखि हामीले महासंघ समावेशी हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन नै गरेका थियौं । हामीले नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु समावेशी चरित्र भएन, सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व भएन र सञ्चारमाध्यमको प्रस्तुती समावेशी भएन भनेर आन्दोलन ग¥यौं । धेरै संघर्ष पनि महासंघ र नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु अलिकति भएपनि समावेशी चरित्रको देखिएको छ । नीति र नेतृत्व जबसम्म समावेशी चरित्रको हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष सशक्त हुँदैन । महासंघलाई समानुपातिक समावेशिताको चरित्रमा उतार्नुपर्छ, समावेशी खालको संरचना र चरित्र देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर मैले यसपटक समावेशी उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
अनन्त अनुराग, प्रतिष्ठानबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वार, नेपाल पत्रकार महासंघ
Chaitra 22, 2077
पत्रकार महासंघमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा हामी पत्रकारहरु राजनीतिक व्यक्तिभन्दा फरक हुन्छौं । तर पत्रकार महासंघ अहिलेसम्म जुन प्रकारको विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दलको आडमा हुँदै आएको थियो र पक्षकारिताको आडमा हुँदै आएको थियो । जतिबेलासम्म महासंघमा खासगरी पार्षद्बाट नेतृत्व चयन हुने अवस्था थियो त्यतिबेलासम्म महासंघमा गएर केही गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई कहिल्यै पनि लागेन । तर जब महासंघ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गयो, त्यसपछि मलाई लाग्यो स्वतन्त्र, बौद्धिक, एजेन्डा भएका पत्रकारहरु त्यहाँ गएर नीतिगत, व्यावहारिक र एजेन्डामा आधारित भएर केही गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले मेरो उम्मेद्वारी गर्ने मनस्थितिमा पुगें । मसँग विगतदेखि केही कुराहरु थिए ती कुराहरुलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर गर्न सक्ने उद्देश्य हो । म एउटा केन्द्रीय सदस्य भएर के पो गर्न सक्छु भन्ने आम प्रश्न हुनसक्छ ।
देवप्रसाद गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
Chaitra 19, 2077
पूर्वअवस्थामा फर्काउनु र विभाजन गर्नु भन्ने कुरा एउटै हो । विभाजन गरेपछि त पूर्वअवस्थामा फर्काइयो । पूर्वअवस्थामा फर्केको भन्नुको तात्पर्य संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठन भयो । २०७४ सालमा एमालेको सरकार बन्दा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको अवस्था हो । पुस ५ गते संसद विघटन गर्दा सरकार संविधानको धारा ७६ उपधारा १ को हो कि २ को हो भन्ने विवाद पैदा भयो । २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो । निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता भयो, नेकपाको सरकार गठन भएको हो भन्ने छ । त्यसलाई निर्वाचन आयोग, संसद सबैले स्वीकार ग¥यो । त्यति मात्र होइन, फागुन ११ गते सर्वोच्चले संसद विघटनविरुद्धको फैसलामा पनि सुरुमा ७६ (२) को सरकार गठन भएपनि पछि ७६ (१) को सरकारमा परिणत भएको छ भनेको छ ।
बीपी साह, केन्द्रीय सदस्य (खुल्ला) का स्वतन्त्र उम्मेद्वार, नेपाल पत्रकार महासंघ
Chaitra 18, 2077
‘पत्रकार र पत्रकारितामाथि जनताको विश्वास बढाउन र देशैभरवि मिडिया लिट्रेसी बढाउने अभियानमा सहभागी बनौ’ नाराका साथ पत्रकार बीपी साह नेपाल पत्रकार महासंघको खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदावरी दिएका छन्। विगत १३ वर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय पत्रकार साह पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने पत्रकारिता तथा समाजिक सञ्जालका विषयमा प्रशिक्षण दिँदै आएका छन्। उनी भन्छन् नेपालको मिडिया र पत्रकारमाथि जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। मिडियामाथि जनताको विश्वास कायम राख्न सकिएन भने नेपाली पत्रकारिताको अर्थ रहने छैन। पत्रकार र पत्रकारितामाथि विश्वास बढाउनु पर्छ। नेपाल पत्रकार महासंघ दलीयकरणमा फसेको छ महासंघलाई स्वतन्त्र पत्रकारहरुको छाता संगठन बनाउनु पर्छ। जहाँ मोफसल अथवा जिल्लामा वा देशको कुनाकन्दरामा काम गर्ने पत्रकारहरुले पनि नेतृत्व लिनु पर्छ। नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रीयमा १ सय ६५ जना उम्मेदवार छन् जहाँ देशैभरीबाट मत पाउने खुल्ला पदमा एक जना मात्र मधेशी मुलका पत्रकार हुन् बीपी साह।
महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Chaitra 17, 2077
हामी स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, समानता संघर्ष गर्दै आएका हौं । तर के मधेशमा पनि लोकतन्त्र छ ? मधेशी र थारुहरुलाई पनि लोकतन्त्रको अनुभूति छ त ? यदि छन् भने तिनीहरु किन जेलमा छन् त ? तिनीहरुले सरकारको माग गरेका होइनन्, हामीले सरकारको माग गरेका होइनौं । अधिकारको पो माग गरेका हौं । किनकि जब वर्तमान संविधानको ड्रफ्ट सार्वजनिक गरिएको थियो, त्यतिबेला हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डा थियो, त्यसअनुसार त्यो ड्राफ्ट आएको थिएन । त्यसमा हाम्रो चित्त बुझेको थिएन र हामी विरोधमा थियौं । सबै संविधानको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हुन्छ । संविधानको आधारभूत सिद्धान्त थियो संघर्षरत पक्षहरुको सहमतिमा अन्तरिम संबिधान बनेको थियो । राजनीतिक सहमतिले संविधानसभाले संविधान बनाउने । त्यो भएन । संविधानसभामा राज्य शक्तिको बाँडफाँड जुन समिति थियो त्यसको प्रतिवेदनको पनि उल्लंघन भयो ।
धिरेन्द्र प्रेमर्षि, साहित्यकार तथा संस्कृति विद्
Chaitra 16, 2077
होली आनन्द, उल्लास र प्रेमको पर्व हो । मनभित्रका विभिन्न वैमनस्यहरुलाई पखालेर आत्मीयताको न्यानोपनमा बाँधिने पर्व हो होली । यहीरुपमा मनाइँदै आएको छ र मैले पनि यसैरुपमा मनाउने गरेको छु । खासगरी हिन्दू सभ्यतामा मनाइने जेजस्ता पनि चाडबाडहरु छन्, सबैको पृष्ठभूमिमा सामान्यतया केही किंवदन्तीहरु जोडिएका हुन्छन् । असत्यमाथि सत्यको विजय, भक्त प्रहलादको कुरा लगायतको यसको पृष्ठभूमि रहेको पाइन्छ । समाजलाई एउटा दिशा दिने क्रममा अलिखित प्रकृतिको प्रावधान, विधान समाजका ज्ञाताहरुले बनाएका हुन्छन् । त्यसै क्रममा यी विभिन्न चाडवाडहरुले कुनै न कुनै संकेत गरिरहेका हुन्छन् । नराम्रो पक्षलाई पन्छाउने, राम्रो पक्षतिर जाने । यो पनि त्यसकै एउटा उपक्रम हो भन्ने लाग्छ । वर्षभरि हामी विभिन्न कामकाजको शिलशिलामा हुन्छौं, यी सब जोडेर एकआपसमा बसेर रमाइलो गरौं, उल्लास मनाऔं भन्ने सामान्य मान्यता यही हो ।
संजय यादव, केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Chaitra 15, 2077
अहिले एक चरणका वार्ताहरु अगाडि बढिसकेका छन् । जसपाले केपी ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका प्रचण्डसँग पनि वार्ता भएको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा हो भने शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले हामीलाई चेकमा दिन तयार छन् तर बैंकमा उहाँहरुको खाता नै छैन । कांग्रेस र माओवादीसँग हामीले पहिला पनि सम्झौता गरेका थियौं, उहाँहरुले चेकमा दिनुभयो तर त्यसको लाभ हामीलाई भएन । उहाँहरुले जसपाको माग पूरा गर्छ, रेशमलाल चौधरीलाई रिहाइ गर्छ, मुद्दाहरु फिर्ता हुन्छ तर उहाँहरु अहिले गर्ने अवस्थामा नै हुनुहुन्न । तर अर्को केपी ओलीजीले हामीलाई नगदमा दिन सक्नुहुन्छ । किनभने अहिले सत्तामा उहाँ हुनुहुन्छ र सरकारले चाह्यो भने तुरुन्त हाम्रा केही मागहरु पूरा हुनसक्छ । हिजोका दिनमा मधेशी जनताको सबभन्दा बढी आक्रोश केपी ओलीमाथि नै थियो ।
लक्ष्मण लाल कर्ण, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा सांसद, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Chaitra 14, 2077
नेताहरूले कुनै कुरा गर्छन् भने पार्टीको निर्णय गराउनुपर्छ, यो पनि नेताकै काम हो । यो सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार कसरी बन्छ त्यसबारे त व्याख्या गर्नुप¥यो नि । जसले अर्को सरकार बनाउने हो, उसले एमालेलाई अहिले पनि छोडेकै छैन, एमालेलाई समर्थन दिइरहेकै छ, उसका मन्त्रीहरू पनि त्यहीं छन् । अर्को कांग्रेस पार्टीले हाम्रो अगुवाईमा सरकार बनाउ भनेको पनि छैन । कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्ने भनेको छ । अनि हामीले मात्रै यो सरकारलाई हटाउ कसरी भन्ने त ? जो मूल पात्र हुन् कांग्रेस र माओवादी अग्रसर छैन भने हामीले के गर्ने ? त्यसकारण सम्पूर्ण राजनीतिक अवस्था परिपक्क नभइकन नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई हेरेर दुई धार भो भन्ने छैन । पार्टीले निर्णय गर्छ, दुई धार छैन । अहिले राजनीतिक परिस्थिति नै स्पष्ट छैन भने पार्टीले धार किन बनाउनुप¥यो ।
Chaitra 11, 2077
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले उठाएका माग र मुद्दाहरुप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सकारात्मक रहेको भन्नुभएको हो । त्यसअनुसार केही कार्यहरु पनि अगाडि बढाउनुभएको हो भन्ने कुराको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ । उहाँले सबै माग मुद्दा सम्बोधन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको हो । हामीलाई प्राप्त भएको सूचनाअनुसार हाम्रा मागहरुबारे उहाँले गृहकार्यसमेत सुरु गरिसक्नुभएको छ । मधेश आन्दोलनका बखत आन्दोलनकारीहरुमाथि लगाइएका विभिन्न झुठा मुद्दाहरु खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो भन्ने हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौं । त्यसैगरी, अदालती प्रक्रियामा रहेका रेशमलाल चौधरी लगायतका विभिन्न मुद्दाहरुको बारेमा पनि न्याय प्रणालीमार्फत् एउटा निष्कर्षमा कसरी पुग्न सकिन्छ, त्यससम्बन्धी पनि प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउनुपर्छ हामीले भनेका छौं । त्यसमा पनि केही प्रक्रियाहरु अगाडि हो ।
अब्दुल खान, केन्द्रीय सदस्य, जनमत पार्टी
Chaitra 09, 2077
जनमत पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन यही चैतको २८ र २९ गते प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधामको बाह्रबिघामा हुन गइरहेको छ । प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनलाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि हामीले तयारी तीव्ररुपमा गरिरहेका छौं । महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समितिहरु निर्माण गरिएको छ, जुन समितिहरुले आआफ्नो तयारी तीव्रताका साथ गरिरहेका छन् । हाम्रो महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा छ । हाम्रा प्राविधिक तयारीहरु पूरा भइसकेका छन् । हाम्रो महाधिवेशनको तयारी लगभग भइसकेका छन्, तत्कालीनरुपमा गरिने कार्यहरु हुँदैछन् । हाम्रा सबै तहका अधिवेशनहरुसमेत पूरा भइसकेका छन्, कतिपय ठाउँमा हुने क्रममा पनि छन् । हाम्रो महाधिवेशनमा आउने पाहुनाहरुसँग सम्वादमा छौं । यो महाधिवेशनमा देशविदेशका अतिथिहरुलाई हामीले बोलाउने तयारी गरिरहेका छन् । खासगरी सबै राजनीतिका दलका नेताहरुलाई हामीले बोलाउने प्रयासमा छौं ।
योगेन्द्र राय यादव, प्रदेश २ का भूमि सुधार, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री एवं जसपाका केन्द्रीय सदस्य
Chaitra 06, 2077
स्वाभाविक रुपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अहिले किंगमेकरकै अवस्था छ । हामी किंगमेकर हुँदैमा बिना प्रष्टता कुनै पनि क्रियाशीलताको कुनै अर्थ हुँदैन । पछिल्लो कालखण्डमा नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई विश्लेषणात्मक तरिकाले आमजनताको बीचमा प्रस्तुत भइरहँदा प्रष्टताका साथ आफ्नो राख्नै पर्ने हुन्छ । कति दिन र कहिलेसम्म एउटा व्यक्ति र वर्ग विशेषको नेतृत्वमा यो मुलुक सञ्चालन रहन्छ ? यी सबै असफल भइसकेका छन्, जनताले बुझिरहेका छन् । सीमित वर्गको कब्जामा देशको अर्थव्यवस्था र राजनीतिक धार छन् । त्यो राजनीतिले देशमा समृद्धि र विकास ल्याउन सकेन । यो देशका उपेक्षित समुदायका व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने, कहिले नेतृत्व दिने ? आखिर यो प्रश्न छ । शोषित, पीडित र उपेक्षित समुदाले भन्छन्, हामी पनि सक्षम छौं । एउटा सीमित वर्गले मात्रै यो देश हाँक्न सक्दैन ।
राजीव झा, नेपाल–भारतका खुल्ला सीमा सम्वाद समूहका संयोजक तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य
Chaitra 05, 2077
नेपाल र भारतबीचको खुल्ला सीमा बन्द भएको एक वर्ष पूरा भइसक्यो । जुन हामीले विगतमा निर्वाधरुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका थियौं । हामीलाई पहिला नेपाल र भारतबीचमा सिमाना पनि छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैनथ्यो । राजनीतिक आस्थाको आधारमा दुई देशबीच एउटा रेखा मात्र कोरिएको छ । दुवै देशका नागरिक भाईचारा जस्तो बसिरहेका छन् । आफ्नै दाजुभाईहरु वनबासको जस्तो थुनामा राखेको जस्तो सीमा बन्द गरिदिएको छ । यो एकदम अमानवीय, निन्दनीय हो । दुई देशबीच जुन बेटीरोटीको सम्बन्ध छ, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई समाप्त गर्ने कुकृत्य हुँदैछ । यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन । नेपाल खुल्ला सीमा सम्वाद समूहले सीमा खोलाउनका लागि महिनौंसम्म धरणा दिएको हो । अविलम्ब नेपाल र भारतबीचको सीमा खुला हुनुपर्छ ।
देवेन्द्र मिश्र, केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Chaitra 04, 2077
राजनीति त ‘डिमान्ड्स एण्ड सपोर्ट’ बाट चल्ने हो । यदि जसपाको मागलाई केपी शर्मा ओलीले पूरा गर्छ भने सहकार्य गर्न सकिन्छ । जसपा स्पष्ट छ । जसपाका नेताहरु स्पष्ट नहोलान् । संविधान संशोधनबाट नै देशले अग्रगामी दिशा निर्धारण गर्न सक्छ भन्नेमा जसपा स्पष्ट छ । रेशम चौधरी जस्ता सांसदलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर पनि थुनामा राखेका छन्, त्यो गलत हो भनेर सबै दलका नेताहरुले भनिरहेका छन् । यस विषयमा राजनीतिक निर्णय गरेर तुरुन्त रेशमलाई रिहा गरेर निकास दिनुप¥यो । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा लगाइएका विभिन्न मुद्दाहरुलाई निरस्त गर्नुप¥यो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुप¥यो । भनेपछि जसपाको स्थिति एकदम स्पष्ट छ । हाम्रा यी मागहरु जसले पूरा गर्छ, उससँग हामी नजिक हुन्छौं । यो स्पष्ट धारणा छ ।
फरमुल्लाह मन्सुर, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
Chaitra 03, 2077
वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने तहसम्म अहिले कुराकानी भएकै छैन । मिडियामा आइरहेका कुराहरुको आधारमा जसपा निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन । किनभने जसपाको केपी ओलीसँग बालुवाटारमा विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेको छ । ती वार्ताहरु सकारात्मक छ र सबै पार्टीहरुसँग वार्ता चलाइरहेका छौं भन्ने कुराहरु उहाँहरुको आइरहेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने समयमा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेर पार्टी नै विलय गरायो । तत्कालीन अवस्थामा राजपा र समाजवादी पार्टीले पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन ग¥यो । उपेन्द्र यादवको पार्टीले सहमति गरेर सरकारमा नै सहभागी नै भयो र राजपाले समर्थन ग¥यो । त्यो अवधिमा मधेशका कुनै पनि मुद्दाको सम्बोधन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेन । केपी ओलीको व्यवहारले तत्कालीन ती दुवै पार्टीलाई सडकमा पु¥यायो ।
उमेश कुमार यादव, सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
Chaitra 02, 2077
अहिलेसम्म नैतिक र व्यावहारिकरुपमा केपी ओलीलाई समर्थन नभएपनि कानूनीरुपमा फिर्ता नलिएसम्म समर्थन छ नै । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन, त्यसलाई सहयोग गर्न सकिँदैन । पार्टीले समर्थन फिर्ता कहिले लिने, के गर्नेबारे आन्तरिक तयारी हुँदैछ । पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ । अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने बित्तिकै भावी प्रधानमन्त्रीको विकल्प पनि साथै दिनुपर्छ । माओवादी केन्द्र एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव लगाएर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाउँ दिन सक्दैन । त्यो हिसावले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग हाम्रो पार्टी छलफल गर्दैछ र एउटा सहमति पुग्दैछ । सहमतिमा पुग्ने बित्तिकै वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसका लागि अहिले ढिलाई भइरहेको छ । वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रको पनि दाबी रहन्छ र अर्को पनि हुनसक्छ ।
रामरिझन यादव, केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Chaitra 01, 2077
वास्तवमा उपेन्द्र यादवजीको यो लाइन हो । त्यो आजदेखि होइन, जुन दिन संसद विघटन भयो त्यहीं दिनदेखिको उहाँको लाइन हो र यो पार्टीकै लाइन हो । संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने व्यक्तिसँग सहकार्य गर्नुभन्दा प्रजातान्त्रिक धार भएकासँग सहकार्य गर्नु भनेको राम्रो सोच हो । उपेन्द्र यादवजीले गर्न खोज्नुभएको सहकार्यमा उधारोमा हुन्छ तर महन्थ ठाकुरले सरकारसँग नगदीमा गर्न चाहनुभएको छ । सरकारले अहिले नगदीमा सम्झौता गर्न सक्छ, रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गरोस् । रेशमलाल चौधरीलाई रिहा र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्षमता त छ सरकारसँग । नगदीमा गर्ने भन्ने कुरा पनि सही हो । आन्दोलनकारी शक्तिहरु एकजुट भएर सहकार्य गरौं भन्ने जुन सोच हो, त्यसमा ओज छ, दम छ र त्यो हुन सक्यो भने त्यसले एउटा सही राजनीतिक संस्कारको सुरुवात हुन्छ ।
Phagun 28, 2077
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि नेपका एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामै पु¥याइदिएको छ । अहिले दुवै पार्टी छुट्टाछुट्टै अवस्थामा छन् । त्यसले गर्दा अब विधिवत् हिसावले नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अब रहेन, एमाले र माओवादी केन्द्र भइसक्यो । माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएकै छ । यदि माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने हाम्रा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै न कुनै दलसँग तालमेल गर्नैपर्छ । सोही क्रममा सत्ता समीकरणका लागि संसदको चौथो ठूलो दल जसपासँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । नेकपा एमाले पहिलो शक्ति हो र जसपा चौथो शक्ति । त्यसैले पहिलो र चौथो शक्ति मिलेर सरकार सञ्चालन गर्छ भने यसले राम्रो सन्देश पनि जान्छ । केपी ओली मधेश विरोधी होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
Phagun 27, 2077
विगतमा हामीसँग एमाले, माओवादी र कांग्रेसहरु पटक–पटक लिखित सम्झौताहरु गरेका छन् । ती सम्झौताहरु सम्झौताका लागि मात्रै गरियो, कार्यान्वयन गरिएन । ती पार्टीहरुले हामीलाई बारम्बार ठग्दै आएका छन् । यो देशका उत्पीडित वर्ग समुदायले आफ्ना अधिकार, सम्मान र पहिचानका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । अहिले जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिकामा छ । हामी अहिले सशक्त र सतर्क भएका छौं । हाम्रा लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दल प्रतिगामी हो । संविधान निर्माणका बेला हामीले हाम्रा माग र मुद्दाहरु पनि सम्बोधन होस् भनेर सडक हुँदा ती शासकवर्गले हाम्रा टाउको र छातीमा गोली चलाएर पनि संविधान जारी गरे । हामीसँग ती पार्टीहरुले आज वार्त र सम्वाद गर्दा हामीले कुनै नयाँ कुरा भनिरहेका छैनौं ।
ज्वाला कुमारी साह, नेता, नेकपा एमाले
Phagun 26, 2077
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामसम्बन्धी विवादमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामीलाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काइदिएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अदालतको निर्णयले ब्युताइदिएको छ । हामी सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्छौं । तीन वर्ष पहिला पार्टी एकता गर्ने बेलामा एमाले र माओवादी विघटन गरी नेकपा घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला हामीले त्यो एकतालाई स्वीकार गरी खुशियालीसमेत मनाएका थियौं । अहिले सर्वोच्चले साबिककै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिए पनि हामी विचारमा परिपक्क छौं । हामीले एउटा बोल्ड निर्णय गरेर सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै साथ दिनेछौं । प्रधानमन्त्री ओली समूहमा गएका पूर्वमाओवादीका सबै नेताहरु फर्किनुपर्ने बाध्यता छ भन्ने खालका भ्रमहरु फैलाइएको छ । त्यो बिल्कूल गलत हो । हामी कुनै पनि हालतमा माओवादी केन्द्रमा फर्किनेवाला छैनौं ।
गिरीशचन्द्र लाल, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश
Phagun 25, 2077
ऋषि कट्टेलको निवेदन दाबी थियो कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हाम्रो पार्टी हो, हाम्रो पार्टीको नाउँमा अर्को पार्टी दर्ता हुनुहुँदैन । नाउँ खारेज गरी पाउँ भनेर ऋषि कट्टेलको निवेदन दाबी थियो । अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएपनि मान्नुपर्ने हुन्छ । तर यसको पुनरावलोकन पनि लाग्छ । कुनै पक्षले पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदन लिएर गए भने त्यो निवेदनमाथि पनि विचार हुन्छ । जुन प्रश्नहरु उठाइएको थिएन त्यसबारे पनि यो फैसलामा निर्णय गरिएको छ । ऋषि कट्टलको निवेदनमा दुई पार्टी अलग गरी पाउँ भन्ने त थिएन । तर अदालतले दुई पार्टी मिलेर बनेको पार्टीलाई नै अलग–अलग अथवा पूर्ववत् अवस्थामा रहने निर्णय गरिदिएको छ । अदालतले एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा नभई अर्को कुनै नाम रोज्नुस् भन्न सक्थ्यो ।
सुनिता साह, सामाजिक अभियन्ता
Phagun 24, 2077
हामीले पनि १११औं अन्तर्राष्ट्रि श्रमिक महिला दिवस मनाएका छौं । हामीले विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरेर यसपटक अलि फरक तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएका छौं । ग्रामीण भेगका महिला दिदीबहिनीहरुलाई महिला दिवस के हो भनेर पटक्कै थाहा हुँदैन । पहिला महिला दिवस मनाउँदा गाउँबाट उहाँहरु बोलाएर ल्याइएको हुन्थ्यो र एउटा औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरिएको देखिन्थ्यो । सरोकारवालाहरुले विगतका वर्षहरुमा देखावटीरुपमा मात्रै महिला दिवस मनाउँदै आएको छ, जसले कुनै खासै अर्थ राख्दैन । यो पटक हामीले ग्रामीण भेगमा गएर दैनिक ज्यालादारी गर्ने महिला दिदीबहिनीहरुलाई बोलाएर नारीलाई सारीले सम्मान, सेनेटरी प्याड र मास्क दिएर सम्मान गरका छौं । यसरी हामीले सभ्य र भव्यताका साथ नारी दिवस मनाएका छौं । महिलाको सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता र चेतना कसरी वृद्धि हुन्छ भन्ने विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्यौं ।
रामप्रवेश बैठा, उपाध्यक्ष, दलित विकास समिति, प्रदेश २
Phagun 21, 2077
दलित विकास समितिको पहिलो काम कर्तव्य समग्र दलितहरुको हक र अधिकारका लागि क्रियाशील रहनेछ । खासगरी प्रदेश २ मा अहिले पनि विद्यमान जातीय छुवाछुत, हत्या हिंसा लगायतका घटनाहरु भइरहेका छन्, त्यसलाई निगरानी गर्ने कुनै पनि संघसंस्था नभएकोले प्रदेश २ को सरकारले यसलाई मध्यनजर गर्दै दलित सशक्तिकरण ऐन पारित गरी सोहीअन्तर्गत यो दलित विकास समिति गठन गरिएको हो । छुवाछुतविरुद्ध हाम्रो संविधानमा कानून रहेपनि त्यो प्रभावकारीरुपमा लागू नभइरहेकोले यसको आवश्यकता महसुस भयो । प्रदेश सरकारले सुरुमै दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएको थियो । दलित विकास समितिका पदाधिकारीहरुले आठै जिल्लामा गएर दलितमाथि भइरहेका हत्या, हिंसा, ज्यादती, जातीय छुवाछुतविरुद्ध रहेको कानूनलाई कडाईका साथ लागू गराउन पहल गर्नेछन् । यसअन्तर्गत दलितहरुको विकासका लागि पनि विभिन्न पक्षहरुमा दतारुकताका साथ काम गर्नेछौं ।
मनिष मिश्र, जसपानिकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका अध्यक्ष
Phagun 14, 2077
हामी पूर्वराजपानिकट थियौं, अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालनिकट छौं । खासगरेर हामी अहिले समायोजन प्रक्रियामा छौं र त्यो समायोजनका निम्ति थप व्यवस्थित तरिकाले प्रस्तुत हुनका लागि यो भेला थियो । हामी आफ्ना पूर्वराजपाका विद्यार्थी नेताहरुसँग पहिला फोन र सामाजिक सञ्जालमा सम्वाद गरिरहेका थियौं । ती सम्वादहरुलाई हामीले मूर्त रुप दिनका लागि प्रत्यक्षरुपमै एकचोटि सम्वाद गरौं भनेर हामीले गत १२ र १३ गते दुईदिने भेला बोलाएका थियौं । यसको मुख्य उद्देश्य पूर्वराजपानिकट विद्यार्थी नेताहरुको बीचमा सहकार्य, समन्वय र समायोजनका निम्ति सल्लाह सुझाव लिएका हौं । यो भेलाले पूर्वरजपा र पूर्वसमाजवादीका विद्यार्थीहरुबीच समायोजनका लागि उत्कृष्ट पूर्वाधारहरु तयार गरेको छ । हाम्रो दुईदिने भेलाले सोही किसिमको निष्कर्षहरुसमेत निकालेको छ । पूर्वराजपानिकट विद्यार्थी राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ एउटा क्षमतावान, नैतिकवान र सैद्धान्तिक संगठन हो भन्ने सन्देश दिएको छ ।
सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, जसपा
Phagun 13, 2077
जसपाले बारम्बार उठाउँदै आएको सांसद रेशम लाल चौधरी लगायतका विभिन्न राजबन्दीहरुको रिहाइ, झुठा मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाहरु अहिले पनि जीवित छन् । ती मुद्दाहरु हाम्रो धरोहर हो । त्यसैले नेतृत्वमा जोसुकै आएपनि हाम्रा मुद्दाका पक्षमा को सकारात्मक हुन्छ, कसले तुरुन्त कस्तो मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ, त्यस हिसावले हामीले निर्णय गर्नुपर्छ । यसबारे पार्टीभित्र छलफल भएर निर्णय होला । त्यसैले कांग्रेस र कम्युनिष्टभन्दा जसपा फरक यहीं मुद्दा हो । उपेक्षित समुदायको उत्थानका लागि हामी एकताबद्ध भएका छौं र जसपा निर्माण गरेका छौं । जुन नेतृत्वले सही मार्गचित्र दिन्छ, त्यो मार्गचित्रलाई मध्यनजर गरी हामी आफ्नो समर्थन त्यो सरकारलाई दिनुपर्छ । सरकारमा जानु नजानु गौण कुरा हो । विगतमा अहिलेका हाम्रा नेताहरु पटक–पटक सरकारमा गए, तर हाम्रा मुद्दाहरु एक इन्च पनि अगाडि बढेन ।
कृष्णा सिंह, केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Phagun 11, 2077
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले घोर निन्दा ग¥यौं । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट यो संविधान प्राप्त भएको छ । जबकि हामीले जुन संविधानलाई अस्वीकार गरिसकेका थियौं र त्यतिबेला जब चुनाव घोषणा गरियो, हामीले बाध्यात्मक स्थितिमै चुनावमा भाग लियौं । जबकि हाम्रा थुप्रै असन्तुष्टिहरु थिए त्यो संविधानमा । त्यहीं संविधानलाई जसरी बहुमतको सरकारले कुल्चने कुचेष्टा गर्यो त्यो निन्दनीय कार्य हो । यो कुरा अदालतमा छ, हामी त्यसको पर्खाईमा छौं । हामीले अदालतको निर्णय पहिला पनि मानेका छौं र आउने दिनमा पनि अदालतको निर्णय मान्ने छौं । संसद पुनर्स्थापना नै भयो भने हामीले पाउने केही होइन । यदि चुनाव नै भयो भने हामी आफ्ना एजेन्डाहरु लिएर जनताको बीचमा जान सक्छौं ।
Phagun 05, 2077
देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटको निकास बहुत गाह्रो छ । किनभने यस देशका भ्रष्ट नेताहरुले देशलाई यस्तो परिस्थितिमा पु¥याइसक्यो यसकारणले वर्तमान अवस्थामा संसदको पुनस्र्थापना वा चुनाव होस् दुवै स्थितिमा मुलुकमा संकट नै बढ्ने देखिन्छ । अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास एउटा मात्रै छ । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलनको आह्वान गर्नुपर्दछ । यो समस्याको समाधानका लागि अविलम्ब सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलन आह्वान होस् । सबै दलका प्रतिनिधिहरु एक ठाउँमा बसेर यस समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा समझदारी पत्र तयार गर्ने, त्यसमा सबै पार्टीका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गर्ने गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यो गोलमेच सम्मेलनबाट जेन निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णयलाई सबै दलले मान्ने गरी यो समस्याको समाधान गरिनुपर्दछ । त्यसअनुसार देशलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
रामसरोज यादव, प्रदेश २ को संसदीय दलका नेता, नेपाली कांग्रेस
Phagun 04, 2077
प्रदेश २ सरकारको तीनवर्षे कार्यकाल विकास र पूर्वाधार निर्माणको दृष्टिकोणले असफल नै हो । यो सरकारको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसकेको छ । यो सरकारले कार्ययोजना बनाएको थियो, त्योअनुसार प्रदेशस्तरीय देखिने गरी कामै गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको थियो, हामीले प्रशंसा पनि ग¥यौं । तर बजेटको पैसा डेढ लाख, दुई लाख गरी कनिका छरेजस्तै देखियो । सरकारको बजेट डेढ दुई लाखको हुँदैन । उपभोक्ता समितिहरु बनाएर कार्यकर्ता पाल्ने, कमिशन खानेभन्दा अन्यथा कुनै राम्रो काम भएको छैन । झुठो बोलेर जनतालाई ठग्नु बेग्लै कुरा हो । प्रदेश २ मा प्रचूर सम्भावना भएको मुख्यगरी तीनवटा कुराहरु छन् । यस प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो आधार कृषि हो, पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ र उद्योग कलकारखानाको पनि निकै सम्भावना छ ।
Phagun 03, 2077
देशको अवस्था अहिले राम्रो छैन । नेपाल गोलचक्करमा फँसेको छ । यो गोलचक्करबाट कहिले निस्किने हो थाहा छैन । घटनाहरु दोहोरिरहेको छ, प्रतिगमन भएको छ । देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिगमन गरेका छन् । संविधानमाथि प्रतिगमन गरेका छन् । उनले संविधानमाथि प्रहार गरेका छन्, कू गरेका छन् । त्यसको विरुद्धमा हामी लड्दै छौं, त्यो प्रतिगमन सच्चिनुपर्छ भन्दैछौं । यो देशमा कति प्रतिगमन हुने हो ? नेपाली जनताले कति प्रतिगमन सहने हो ? पटक–पटक प्रतिगमन हुने, स्वार्थ पूरा भएन भने शासकवर्गहरुले प्रतिगमन गरिहाल्ने । यो कतिचोटि दोहोरिने हो नेपालमा ? देश कंगाल हुँदै जाने अनि शासकवर्ग प्रतिगमन गर्दै जाने, संविधान मिच्दै गर्ने, जनताको अधिकार खोस्दै जाने, पहिचान र अधिकार नदिने र देशलाई कंगाल बनाएर राखिदिने ।
सुरेन्द्र चौधरी, संयोजक, टीकापुर राजबन्दी रिहाइ राष्ट्रिय अभियान
Phagun 02, 2077
हाम्रो गुनासो पनि यही हो कि यदि सबैले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भनिरहेका छन् भने राजनीतिक रुपले नै किन समाधान गर्ने तर्फ पहल भइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यसलाई राजनीतिक घटना भनिरहनुभएको छ । उहाँहरुले बोलेर मात्रै त हुँदैन, पहल गर्नुप¥यो नि त । थारुहरुको गाउँमा गएर आमसभामा यो कुरा बोल्ने, त्यसपछि काठमाडौं आएर चुप लागेर बस्ने, यो विडम्बना छ । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि धनगढी जानुभयो थियो, त्यहाँको आमसभामा बोल्नु नै भएको थियो कि टीकापुर घटनामा थारुहरु दोषी छैनन्, दोषीहरु अर्कै मान्छेहरु छन्, रेशम चौधरी लगायतले न्याय पाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन पनि छ, उहाँले पढेर नै भन्नुभएको होला ।
उदयकुमार यादव बरबरिया, मेयर, शहीदनगर नगरपालिका, धनुषा
Magha 30, 2077
निश्चय नै अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ र तीनै सरकारबीच आपसी सहकार्य भइरहेको अवस्था छ । तर अहिले देश र संविधान नै संकटमा छ । यस्तो अवस्थामा देशमा अन्योलता त हुने नै भयो । किनभने त्यहीं संविधानलाई टेकेर मुलुकमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु बनेका छन् । अहिलेको महत्वपूर्ण काम भनेको संविधानको रक्षा गर्नुको साथै विभिन्न आन्दोलनहरुबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको संस्थागत गर्नु नै हो । त्यसैले हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नुभएको प्रतिगमनकारी कदमको विरोधमा छौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धमाधम संविधानलाई मिचेर विभिन्न कामहरु गरिरहनुभएको छ । पाँच वर्षका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई मासेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ, यो संविधान र संघीयता विरोधी कदम हो । त्यसैले हामी पनि विरोधमा उत्रिनु परेको छ ।
पंकज कुमार कर्ण, अधिवक्ता
Magha 29, 2077
नयाँ संविधानअन्तर्गत संघीय शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरेका छौं । संघीयता भनेको पावर डिभल्यूसन हो, पावरको डिसेन्ट्रलाइजेशन होइन । यी दुइटा तत्वको बीचमा के विभेद र फरक छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । हामी अझै पनि पावर डिभल्यूशनभन्दा पनि पावर डिसेन्ट्रलाइजेशनमै रुमलिरहेका छौं । त्यसकारण संघीयता भनेको पावर डिभल्यूशन हो । त्योअनुसार जसरी हामीले विभिन्न कामहरु गर्नुपर्ने थियो, विभिन्न कानूनहरु बनाएर तत्कालिक अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, ती विषयहरुमा एकदम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यो सुस्त गतिले हामीले खोजेको लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन हुनेछ । त्यसकारण वर्तमान अवस्थामा संघीयता अलिकति कठिन र जटिल मोडमा छ । यसको सुखद र सफल कार्यान्वयनका लागि जति पनि आवश्यक तत्वहरु छन्, शीघ्रातिशीघ्र सबैले आआफ्नो ठाउँबाट चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्नुपर्छ ।
किशोर कुमार यादव, युवा नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Magha 28, 2077
नेपालको वर्तमान संविधानमा त्रुटिपूर्ण छ, सबै नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो संविधानलाई सबै नेपाली जनताको साझा संविधान बनाउनुपर्छ भनेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । यो संविधान पूरै खराब छ भनेर हामीले कहिल्यै भनेका छैनौं । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त यो संविधान आन्दोलनका केही उपलब्धिहरु पनि हासिल भएको छ । हामीले प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्ष जारी राखेका छौं । त्यसैले यो संविधानमा हामी संशोधन खोजेका हौं । हामीले संविधान संशोधनको माग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले यो संविधानलाई खारेज गर्ने बाटोमा लाग्नुभएको छ । सोही कदमका विरुद्ध हामी आन्दोलित भएका छौं । केपी ओली प्रवृत्तिका कारण पूरा संविधान नै अहिले संकटमा परेको छ ।
डा.विनय पञ्जियार, नेता, जनमत पार्टी
Magha 27, 2077
हाम्रो पार्टीको आधार प्रदेश नं. २ नै हो र मेरो घर पनि प्रदेश २ मै पर्छ । जसको राजनीतिक आधार जुन ठाउँमा हुन्छ, उसले त्यहीं ठाउँको आवाज उठाउने गर्छ । हाम्रो पार्टीको उद्गमस्थल पनि मधेश भएकोले मधेशसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तु उठाउन गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । प्रदेश १ का झापा, मोरङ र सुनसरीमा पनि हाम्रो संगठन छ, त्यहाँका पनि हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । प्रदेश नं. ५ र ७ मा पनि त्यस्तै हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरु लागेका छन् । त्यसकारणले हामीले समग्र मधेशको परिकल्पनालाई अझ पनि जीवितै राखेका छौं । प्रदेश २ को सरकारले यदि आज सही हिसावले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरेको भए हामीले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । संघीयतामाथि आज कालो बादल किन मडारिरहेको छ, त्यो कुराको विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, राष्ट्रियसभा सदस्य तथा जसपा नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य
निश्चितरुपमा संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको छ । अदालतको काम अदालतले नै गर्छ तर हामीले यो गलत हो भनेर भन्न पाउँछौं । हामीले असंवैधानिक कुराको विरोध गर्नु वा जनतालाई बुझाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । हाम्रो विरोध अदालतको विरोधमा होइन, त्यसैले यसले अदालतमाथि कुनै प्रभाव पर्दैन । अदालतमा पक्ष र विपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन्, हामी पनि आफ्नो कुरा जनतामाझ राखिरहेका छौं । हामीले अदालतको विरोधमा कुनै गतिविधि गरेका छैनौं । अदालतले फैसला गरिसकेपछि अवहेलना गर्नुभएन । अहिले विचाराधिन रहेको मुद्दामा कुनै प्रभाव वा दबाब दिन खोजेका छैनौं । यो संविधानमा नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भनेर मात्रै भनिरहेका छौं । नेपाली जनता राजनीतिक रुपमा चेतनशील भइसकेका छन्, संविधानमा के व्यवस्था छ सबै कुरा थाहा छ ।
गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
Magha 25, 2077
यो संविधान भन्यो कि नेपालका सबै नागरिक बराबर । यो देशमा राजनीतिक दल फेरिन्छ, प्रधानमन्त्रीको नाम फेरिन्छ, कहिले दाहाल, कहिले भट्टराई, कहिले नेपाल, कहिले ओली, कहिले कोइराला, कहिले देउवा लगायतका सबै प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको यत्रो लामो सूचिमा एउटा मधेशी, थारु वा मुस्लिमको नाम अहिलेसम्म किन आएन भनेर प्रश्न गर भन्यो यो संविधानले । यो संविधानले सबै नेपाली बराबर भन्छ, तर बराबर भनेपछि समान अवस्था छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न हामीलाई प्रेरित गर्छ । यत्रो नेपालको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाको सेनापति कहिले पाण्डे, कहिले राणा, कहिले कटुवाल, कहिले थाहा हुन्छ तर कहिल्यै एउटा यादव, झा, कुर्मी, थारु वा मुस्लिम किन हुन्न ? यो प्रश्न गर्न हाम्रो संविधानले उत्प्रेरित गर्छ । हामी सबैले प्रश्न गर्ने बेला हो यो ।
भोला बनिया, लेखक तथा पत्रकार
Magha 23, 2077
मैले लेखेको ‘सामाजिक विकास, जनसहभागिता र कल्याण’ पुस्तक विमोचन भएको छ । मैले यस पुस्तकमा राज्यबाट पछाडि पारिएका अल्पसंख्यक, शोषित–पीडित र पिछडावर्गका समुदायहरु किन अगाडि आउन सकेनन् र यसको मुख्य कारण के हो भन्ने सन्दर्भहरु उठान गरेको छु । जबसम्म राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायहरुको सामाजिक न्याय हुन सक्दैन, तबसम्म समाजको कल्याण हुँदैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यका हरेक निकायहरु पछाडि पारिएका समुदायहरुको जनसहभागिता हुनु जरुरी छ । यो जनसहभागिता जबसम्म हुँदैन तबसम्म समाजको कल्याण गर्नु भनेको बालवामा पानी खन्याउनु सरह हो । किनभने जब हुँदा खानेहरु संगठित हुन थाल्छन् तब राज्यले उनीहरुलाई फुटाउन खोज्छ । यसको माध्यमबाट उनीहरुमाथि शासन गर्ने प्रवृत छ । मैले आफ्नो पुस्तकमा यीनै कुराहरुको चिरफार गर्न खोेजेको छु ।
डा.शिवजी यादव, नेता, नेकपा ओली समूह
Magha 22, 2077
मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने कम्युनिष्ट पार्टीबाटै सुरु भएको हो । मधेश भनेको नेपालको कोर भू–भाग हो । पछिल्लो समयमा यो देशमा जुन किसिमको राजनीति परिस्थिति सिर्जना भयो र देशमा विभाजनको रेखाहरु कोरिने खालका वातावरण बन्यो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले त्यतिबेला मधेशकेन्द्रित दलमा पुगें । मेरो राजनीति भनेको नेपाली जनता, नेपाली भूभाग, राष्ट्रियता मजबुतीका लागि हो । त्यो देश तब बलियो हुन्छ जब नेतृत्ववर्गहरु पनि राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएको हुनुपर्छ । त्यसैले म राष्ट्रियता र राष्ट्रका लागि नै राजनीति गर्दै आएको छु । अहिले म राजनीतिको मूलधारको मुख्य पार्टीमा आएको छु । अहिलेको राजनीतिक विषम् परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसका लागि मुलुकलाई निकास दिनका लागि म निर्णायक पक्षमा लागेको हुँ । अहिले जसपा, माधव–प्रचण्ड समूहलगायतले जुन आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यो राष्ट्र हितमा छैन ।
शम्भु साह, युवा नेता, नेकपा केपी ओली समूह
Magha 21, 2077
मधेशवादी भनाउँदाहरुको पार्टी कुनै पार्टी नै हैन । तिनीहरुको पार्टी परिवारवाद, नातावाद, द्रव्यवादमा सीमित रहेको छ । यस्ता कुराहरुबाट आजीत भएका इमान्दार नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीबीहरु सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । परिवारवादमा रुमलिएको मधेशवादीको पार्टीले आफ्ना नातागोताका मान्छेलाई पद दिने, पैसा लिएर पद बेच्ने तर नाम मधेशवादी भनाउने । मधेशी जनताको सेन्टिमेन्टलाई भजाएर खाने प्रवृत्ति मात्रै देखिएको छ । यिनीहरुको प्रवृत्तिलाई हेरेर हामी जस्ता मधेशका युवाहरु जागरुक भइसकेका छन् । अब मधेशका सच्चा र इमान्दार नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीबीहरुको यिनीहरुको झुठा खेलमा रमाउनेवाला छैनन् । जुन युवाहरु हिजो राजेन्द्र महतोलाई जनकपुरमा जिताए, आज त्यहीं युवाहरु राजेन्द्र महतोको पार्टी छोडेर नेकपा ओली समूहमा प्रवेश गरिरहेका छन् । किनभने हाम्रा पार्टी अध्यक्ष तथा श्रद्धेय प्रधानमन्त्री ओलीसँग एउटा भिजन छ ।
रामकुमार शर्मा, नेता, नेकपा नेपाल–दाहाल समूह
Magha 20, 2077
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिताबारे हाम्रो तर्फबाट अब कुनै समस्या छैन । हाम्रा पार्टीका अध्यक्षद्वय लगायत प्रमुख नेतृत्वहरु सबै डकुमेन्ट निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सोमबारको हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यसमेतबाट हटाएको छ । यस्तै महासचिवलाई पनि कारबाही गरेको र यसपछि केही आवश्यक संशोधनसमेत गरेर २८८ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ । त्यसैले अब आधिकारिकताको कुरा अब घामजस्तै छर्लङ्ग छ । विधानमा पनि स्पष्ट व्यवस्था छ कि सर्वसम्मतले कुनै निर्णय गर्ने, भएन भने बहुमतले मान्य हुन्छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले पार्टीसँग केही कुरा माग गरेको थियो, ती सम्पूर्ण कागजात र केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि आयोगमा पेस भएको छ । हामी आशावादी छौं कि आगामी निर्वाचन आयोगले त्योअनुसार आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँछ ।
कृष्णकुमार गुप्ता, नेकपा (ओली समूह) को प्रदेश २ कमिटी सदस्य
Magha 19, 2077
संसद विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदम होइन, अग्रगामी कदम हो । किनभने नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको पठाएका थिए । हाम्रो पार्टी नेकपाले प्रतिनिधिसभामा लगभग दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको थियो । उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्दा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ भनेर मत दिएर जनताले ठूलो पार्टी पनि बनाएको थियो । तर हाम्रै पार्टीका ठूला नेताहरुले जहिले पनि पार्टीभित्र किचकिच गर्दा–गर्दा यस्तो अवस्था निर्माण गरिदिए कि यो संसदलाई भंग गरी जनतामा जान प¥यो । ताजा जनादेशमा जानुलाई अग्रगामी कदम भनिन्छ, प्रतिगामी कदम हुँदै होइन । जनताले दिएको म्यान्डेटलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरुले पूरा गर्न दिएनन् । जनता न्यायाधिश हुन्, मालिक हुन् । जनताले फेरि जसलाई अब आफ्नो जनादेश दिन्छन्,
इन्द्रजीत यादव, गैरआवासीय मधेशी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा जनमत पार्टीका विदेश विभागका सदस्य
Magha 16, 2077
अब हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नै विशुद्धरुपमा जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि राजनीति गर्ने हो । यदि हामीलाई पैसा नै कमाउने उद्देश्य भएको भए जुन ठाउँमा हामी पहिला थियौं, त्यहीं राम्रो हुन्थ्यो । यहाँभन्दा धेरै नै राम्रो आम्दानी थियो । महिनाको ५०–६० कमाउनु भनेको नेपालमा बहुत कम मान्छे होलान् । जनमत पार्टीमा लाग्नेहरुलाई हेर्नुभयो भयो सबै पढेलेखेका डाक्टर, इन्जिनियरहरु बढी छन् । हामी पैसा कमाउनका लागि होइन, जनता राज ल्याउनका लागि राजनीतिमा लागेका छौं । हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतजी पनि अमेरिकामा लाखौंको जागिर छोडेर मधेशका गरीब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि दिनरात लागिरहनुभएको छ । जसरी पनि जनता राज कायम गर्नुपर्छ । चुनाव जित्नका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता देखिएको छ ।
Magha 15, 2077
Magha 14, 2077
मधेश आन्दोलनको बलमा मधेशी जनताको सेन्टिमेन्ट लिएर अहिले मधेशी दलकै नेतृत्वको सरकार छ । तर शहीद परिवार र घाइतेहरुको प्रदेश २ मा विजोग छ । शहीदको नाममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले गैरशहीद परिवारलाई राहतहरु मात्र वितरण गरिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा सिरहाका शहीद दिलिप साहको परिवार हो । मन्त्रीले शहीद परिवारलाई भनेर भैंसी वितरण गरे तर शहीद दिलिप साहका परिवारलाई दिइएन । आफ्ना नातागोता वा कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै राहतहरु दिइरहेका छन् । कतिपय यस्ता मानिसहरुलाई पनि बाँडिएको जो मधेश आन्दोलनका बेला देखिएका पनि थिएनन् । मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई ५० लाख दिलाउने प्रतिबद्धता गरे तर अहिले कसै–कसैलाई भैंसी दिने वा जागिर लगाइदिने आश्वासन मात्र दिइरहेका छन् । अहिलेसम्म एउटा पनि प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन ।
डा.सीके राउत, अध्यक्ष, जनमत पाटी
Magha 12, 2077
संसद विघटनबारे जनमत पार्टीले आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो र त्यस विषयमा जनमत पार्टी छलफल गर्ने क्रममा रहेको भनेका थियौं । यो मुद्दामा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । हामीले सर्वोच्चको फैसलाको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । सर्वोच्च के फैसला आउँछ त्यसपछि हामी आफ्नो थप धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं । हामी संविधान विद् होइनौं । संविधान व्याख्या गर्ने सबभन्दा ठूलो र संवैधानिक विशेषाधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै छ । यसमा ठूल–ठूला अधिवक्ता र न्यायाधीशहरु लाग्नुभएको छ, संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । उहाँहरुले जुन धारणा ल्याउँछ त्यसलाई नै हामीले आधिकारिक मानेर आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउनेछौं । तर संसद विघटन दुःखद घटना हो भनेर विज्ञप्तिमार्फत् नै भनेका थियौं । हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको छ, त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।
महन्थ ठाकुर (अध्यक्ष, जसपा नेपाल), उपेन्द्र यादव (अध्यक्ष, जसपा नेपाल), राजेन्द्र महतो (वरिष्ठ नेता, जसपा नेपाल)
Magha 11, 2077
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपनि शासनसत्ता उही असफल भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै हातमा जान्छ । जुन पार्टी सत्ता चलाउन सकेन, असफल भयो, यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि सत्ता उही पार्टीको जान्छ र द्वन्द्व त रहिरहन्छ । नेपालमा संविधान र शासन पटक–पटक बदलियो तर विचार र व्यवहार कहिल्यै पनि बदलिएन । संविधान र शासनको निर्माण यहाँका शासकवर्गले आफ्ना मात्र गर्दोरहेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी कदमको खारेजी नै अहिलेको आवश्यकता हो । प्रतिगमन खारेजी भएपछि मुलुक ट्रयाकमा आउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरुलाई समाप्त पारेर फेरि मुलुकलाई धकेल्ने प्रतिगमनकारी प्रयास गरेका छन् ।
देवेन्द्र मिश्र, जसपाका नेता तथा क्रान्तिकारी समाजका अध्यक्ष
Magha 09, 2077
स्व.गजेन्द्र नारायण सिंहले संविधानसभाबाट देशको संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । हाम्रो पहिलो महाधिवेशनमै यी कुराहरु आएका थिए । नेपाल सद्भावना पार्टीको पहिलो महाधिवेशन जनकपुरधाममा वि.सं. २०४७ सालमा भएको थियो । त्यहीं हिसावले कुराहरु त आए, संघीयता, गणतन्त्र र संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्यो । तर त्यसमा शासकवर्गको नियत खराब भएकोले आधा अधुरा संविधान बनाएर गजेन्द्रबाबुका विचारधाराहरुलाई खण्डित गरेर संविधान ल्याइयो । एक किसिमले भन्ने हो भने मधेशका विचारधाराहरुलाई डाइलुट गरिदियो । नाम त्यहीं मधेशवादी भन्ने, मधेशको कुरो गर्ने तर भित्र केही नहुने । त्यसैले हामी आजको दिनमा गजेन्द्रबाबुलाई सम्झिँदा उहाँको जुन विचारधाराहरु थिए, सद्भावना पार्टीले जुन विचारधारा लिएर हिंडेको थियो त्यसैका लागि हामीले आगामी दिनमा संघर्ष गर्न सक्यौं भने, जनतालाई जागरुक गर्न सक्यौं भने उहाँप्रति ठूलो श्रद्धासुमन हुनेछ ।
मनिष सुमन, जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य
Magha 08, 2077
संसद पुनर्स्थापनाबाटै हाम्रो सबै माग पूरा हुँदैन । यो त अल्पकालीन माग हो । संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रको रक्षा गर्नु अहिलेको हाम्रो उद्देश्य हो । गणतन्त्र र प्रतिनिधिसभा रहे संविधान संशोधन पनि हुन्छ, आम नेपाली जनताको संविधानप्रति स्वामित्व बढ्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी आन्दोलनरत् छौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुप¥यो, त्यसपश्चात् पहिलो काम भनेको अहिले प्रधानमन्त्री जो सनकी छन्, पागल छन् भन्दा पनि हुन्छ, यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट देशलाई उन्मुक्ति दिलाउनुप¥यो । तिनका सखा विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाएर विराम दिनुप¥यो । ती सबै अल्पकालीन काम सम्पन्न गरेर पहिलो प्राथमिकताको काम भनेको संविधानलाई संशोधन गरेर आमनेपाली जनतालाई संविधानप्रति स्वामित्व बढाउनुप¥यो । पुनस्र्थापित संसदमा जसपाको महत्व झन् बढेर जान्छ । पहिला एउटा पार्टीलाई बहुमत हुँदा अन्य पार्टीहरु भूमिकाविहीन थिए ।
Magha 07, 2077
Magha 06, 2077
Magha 05, 2077
Magha 04, 2077
Magha 02, 2077
Push 29, 2077
Push 28, 2077
Push 27, 2077
Push 26, 2077
Push 24, 2077
Push 23, 2077
Push 22, 2077
Push 21, 2077
Push 20, 2077
Push 19, 2077
Push 17, 2077
Push 16, 2077
Push 15, 2077
Push 14, 2077